မြစ်ပြင်ကျယ်မှ ဘ၀ပုံရိပ်များ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » မြစ်ပြင်ကျယ်မှ ဘ၀ပုံရိပ်များ..
ကျနော် ဘိုကလေးကနေ ရန်ကုန်အပြန် လမ်းတကြောမှာ
စိတ်ကူးတည့်ရာရိုက်ခဲ့တဲ့ ဒါ့ပုံ မည်ကာမတ္တလေးတွေပါဗျာ..။
ရိုက်ချက်က ၀ါးပေမဲ့ ဘ၀ခရီးသည်ရဲ့ ဇိမ်တချက်
လှေပေါ်က ဈေးသည်အတွက် ရိုက်ချက်.
စကားမစပ်ဗျာ..ကျနော် ကိုယ့်နယ်ကပြန်လာပီးမှ တွေးမိတာလေးတခုက..
ကျနော့တို့တိုင်းပြည်မှာ ဆင်းရဲတဲ့ဒေသချင်း အတူတူကို ဧရာဝတီတိုင်းက ပိုများဆိုးနေသလားလို့..
ဘာကြောင့်ဂလိုပြောရလည်း ဆိုတာတော့ ကျနော်လည်း မသိတတ်တော့ဘူး..
နောက်တခုက ဒီတိုင်းဒေသရဲ့ လူဦးရေက တခြားဒေသတွေထက် အများဆုံးဆိုတော့လည်း လူဦးရေနဲ့
အချိုးကျကြည့်လိုက်ရင် ဆင်းရဲသား နင်းပြားတွေ ပိုများနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့..
စာလုံးရေ နည်းနေပီး စာသားမပါသေးလို့ ရှာကြံရေးလိုက်တာပါဗျာ..
ဥဥလေးယောက်ျားက လက်ရာကောင်းသားဘဲ ဟိဟိ
ကိုအမတ်မင်းရေ လက်တွေ့ ကျကျ ရေလမ်းခရီးပုံလေးတွေ
ဘိုကလေးဘက်က ရှပ်ပြေးနဲ့သွားရင် ပိုလွယ်တောပေါ့နော်။ ကျိုက်လတ်လည်း အဲဒီလိုသွားလို့ရတယ်။ ဒေးဒရဲကတော့ ရှပ်ပြေးမရှိဘူး။
ကိုအမတ်မင်းရေ….မြစ်ပြင်ရဲ့အလှကတော့ ဘယ်အခါကြည့်ကြည့် မရိုးနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုမြင်ကွင်းတွေကို မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
မြစ်ကမ်းတစ်လျှောက် ကြည့်ကြည့်လိုက်ရင် အိမ်မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဆောက်ထားတာတွေကို အများကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ရွှေကြည်အလှူအဖွဲ့နဲ့ ညောင်တုန်းမြို့နယ်ထဲကရွာလေးတွေရောက်ဘူးတယ်။ တခါကမိုးတွင်းဆိုတော့ကွင်းတွေရေမြုပ်နေလို့ စက်လှေနဲ့အကြာကြီးသွားရတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ကိုထွက်ပြီးမှရွာကိုရောက်တယ်။ စက်လှေစီးရတာပျော်စရာကောင်းတယ်။
ရေ မကူးတတ်လို့ လား မသိဘူး
ရှပ်ပြေးလို့ခေါ်နေကြတဲ့ ပုံထဲကသင်္ဘောတွေကို စီးရတာ အရမ်းအန္တရာယ်များပါတယ် ..
ဟုတ်လား မဝေ ဒါဆို အန္တရယ်များတာပေါ့။ တခါမှ မစီးဘူးလို့ မသိဘူး။
ပုံတွေကို ကြည့်တော့ ဆင်းရဲခြင်းက မလွတ်မြောက်နိုင်ပါဆိုတဲ့ စာသားလေး သတိရတယ်။
အမှန်က တခါမှ မရောက်ဖူးဘူး ။ ခုလိုပုံတွေပဲ မြင်ဖူးတာ။ ရောက်ဖူးတယ် ရှိအောင် တခေါက်လောက်တော့ သွားချင်တယ်။ မြန်မာ့ စပါးကျီဆိုတော့။
လေးပေါက်…ဒေးဒရဲကိုလာလည်လေ… မွန်မွန်တို့မြို့က တံတားကြီးရယ်၊ ကျိုက်ဒေးယျုံဘုရားရယ်၊ ဘုရားလမ်းက ရေကန်ကြီးရယ်၊ မကြာခဏ ပြိုကျတတ်တဲ့ မြစ်ကမ်းပါးရယ်၊ တံငါလှေတွေ၊ သဘောင်္ကြီးငယ် အသွယ်သွယ်နဲ့ လှပနေတဲ့ တိုးမြစ်ရယ်၊ လှုပ်ရှားစည်ကားနေတဲ့ မြစ်ဆိပ်ရယ်၊ ကမ်းပြိုတာတောင် ပါမသွားတဲ့ နှစ်တစ်ရာကျော် မြို့လယ် သံတန်ဆောင်းရယ်။ လမ်းမြေတူးရင်းနဲ့ ပေါ်လာတဲ့ ပေါ်တော်မူဘုရားရယ်..အများကြီးပဲ…
အဟဲ..ဘိုကလေးသားပဲ ကြည့်ထိန်းပေါ့… တော်ကြာ သူ့ကိုယ်ရိုက်၊ ကိုယ့်သူရိုက်တွေ ဖြစ်နေဦးမယ်…
ကျနော့ကို အမတ်မင်းလေး ဆိုတော့ ကျနော့ထက်ကြီးတဲ့ပုံပဲ .
ပို့စ်တခုမဖတ်ခင် ကြည့်ပါအုန်းလို့ အကြံပေးပါတယ်ဗျ..
ပုံလေးတွေကို နှစ်ခြိုက်မိပါရဲ့ဗျာ…. ကိုမက်မင်းလဲ ရွာထဲက နာမည်ကြီးတစ်ယောက်လို့ သိထားပါတယ်… ကိုမက်မင်း ကျွန်တော်က ရွာသားသစ်လေးပါဗျာ.. ပြောမှားဆိုမှားရှိရင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီ သွန်သင်ပေးပါလို့နော်….
ဒါ့ကြောင့် ပျောက်နေတယ်လို့တော့ ထင်မိသား…
မတ်မတ် ရဲ့ ရှုခင်းတွေမြင်ရတော့ ရင်ထဲ မော်တင်စွန်းခရီးသွားခဲ့တာကို သတိရမိတယ်။ ဟိုစွန့်စွန့်စားစားခရီးသွား ပုံရယ်၊ ဇိမ် တချက်ပုံရယ်တွေ့တော့ အသဲယားထှာ။ သူတို့ဘယ်လိုများ ခရီးသွားနေသလဲလို့။ နယ်ခံတွေ အတွက်တော့ အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပေမယ့် တို့ တွေအတွက်တော့ မကြည့်ရဲဘူး။ ပြုတ်များ ကျလိုက်ရင်တော့ အမလေးလေး လှေနဲ့ ရှပ်ပြေးကြားထဲရောက်သွားမှာ။ အန္တရာယ်များလွန်းတယ် နော်။
( ပြောရရင် မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းအပါအ၀င် အောက်ဘက်မွန်.ကရင်ဘက်တွေကို
ဗမာစစ်တပ်ကိုလည်းကြောက်ရ သက်ဆိုင်ရာ သဘုံတွေ ( ဘုန်းကျော်တို့အဖွဲ့တွေပေါ့ )
( ဘယ်လိုမှတော့သဘောမထားပါနဲ့ ဘူမှမပြောလို့ ဗျောင်းဗျန်ဝင်မောင်းဒါ )
ခုလို မြစ်ကမ်းတစ်လျှောက် မော်တော်မစီးရတာ အတော်ကြာတော့ မြင်ရတာ အထူးအဆန်းဖြစ်လို့နေတယ်သိလား။ အရင်ကတော့ ထန်းတစ်ပင်ဘက်သွားလည်း မော်တော်ဘုတ်နဲ့ နောက် တွံတေးကျော်တော့ ကျွန်းကလေးရွာသွားတော့လည်း မော်တော်စီးခဲ့ဖူးတယ်။ မော်တော်စီးတဲ့အရသာက ဘာနဲ့မှမတူသလို ဘေးမြင်ကွင်းလေးတွေကလည်း ရှုချင်စဖွယ်ပဲနော်။ ခုမမြင်ရတာကြာတော့ မြင်ကွင်းလေးက တစ်မျိုးပဲ။
ကိုအမတ်မင်းတယောက် လယ်ကွင်းတွေထဲ..မြစ်ပြင်ကျယ်ထဲ လေကောင်းလေသန့်တွေ ရှူရှိုက်ခဲ့တာပေါ့.. အားကျလိုက်တာ..
အမတ်မင်းလည်း ဒါ့ပုံပညာ ၀မ်းစာ ၀ သွားပြီထင်တယ်။
ဘယ်မြို့မှာ ဘယ်အတိုင်းအတာနဲ့ ဆင်းရဲနေကြသလဲတော့မသိဘူး
တချို့ကျတော့လည်း ပြတ်ပြတ်သားသားပဲဆုံးဖြတ်ပြီး မိဘလက်ငုတ်ဝင်လုပ်ကြတယ်
ကွန်မန့်များအတွက် ကျေးကျေးပါဗျ.. နော်.
ဓါတ်ပုံတွေကို ဖိုတိုရှော့နဲ့ နဲနဲပြန်တို့ထားပါ၏..
ကိုVictory နဲ့ ကိုအောင်ပု ကွန်မန့်များကလည်း
ကျမတော့ ဧရာဝတီတိုင်းဆိုတာကို နာဂစ်အပြီး အလုပ်နဲ့သွားတော့မှ ထဲထဲဝင်ဝင် မြင်ဖူးသိဖူးတာပါ။ ဆင်းရဲကြတာကတော့ အညာကလူတွေလဲ ထိုနည်း၎င်းပါဘဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာမှာ ကျမအလုပ်တာဝန်နဲ့ ၆လလောက်နေခဲ့ဖူးတဲ့ ဘိုကလေးအောက်ဖက် ဟေမာန်ကျေးရွာအုပ်စုထဲက ရွာလေးကိုအလည်တခေါက်ရောက်ပါတယ်။ ရွာကလူတွေကတော့ ဟိုတုန်းကလိုဘဲ ၀တ္တရားမပျက် ၀မ်းသာအားရခရီးဦးကြိုပြုပါတယ်။ ကျမတို့အတွက် သူတို့တောင်နေ့တိုင်းမစားတဲ့ ပုဇွန်ထုပ် ဘဲသားဟင်းတွေချက်ကျွေးလိုက်ကြသေး။ သို့သော် ပြန်ခါနီး ဥက္ကဌ နဲ့တကွ ရွာလူကြီးတွေနဲ့ စကားပြောပြီးကြတဲ့အခါမှာတော့ အပြန်ခရီးအတွက် စိတ်မကောင်းစရာအတွေးတွေတပွေ့တပိုက် ပါလာတော့တာပါဘဲ။ သူတို့ပြောတာက ” ဆရာမရယ် ကျနော်တို့ရွာအခြေနေလဲ ကြည့်ပါအုန်း။ အရင်လို ဟုတ်သေးရဲ့လားလို့ ။ ရွာထဲမှာ ဖွင့်နေကျ ၂ဆိုင်ထဲသော အဆာပြေ (မုန့်ဟင်းခါး၊ ကော်ဖီ ၂မျိုးထဲသာ) ရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတွေတောင် တဆိုင်အရင်းပြုတ်သွားရှာဘီ။ ရွာထဲက လမ်းပြင်၊ တံတားဆောက် (ကျမတို့အဖွဲ့ ထောက်ပံ့မှုနဲ့) လုပ်ထားတာတွေလဲ ဆရာမတို့ထွက်သွားထဲက ပြန်မပြင်နိုင်တော့တာ အခုဆို ၂နှစ်ကျော်ရောပေါ့။ လမ်းမီးလေးရနေတာတောင် ဥက္ကဌ ရဲ့ဟာလာစက် (ဆန်စက်) လည်နိုင်သေးလို့။ လယ်တွေက အထွက်မကောင်းတော့ လူငယ်တွေ အတော်များများလဲ အပြင်ထွက်အလုပ် လုပ်ကြရတယ်။ ရေလုပ်ငန်းသမားကလဲ ငါး ပုဇွန်အရင်လိုမပေါတော့ လုပ်ငန်းအဆင်မပြေတဲ့” ။ ကိုယ်စိုက်တဲ့စပါး ကိုယ်မစားရတဲ့ဘ၀တွေအတွက် ကိုယ်စားရင်နာမိပါတယ်။
ကိုမတ်ရဲ့ ဒါ့ပုံထဲက ရှပ်ပြေးက ကျမဘိုကလေးသွားတိုင်းစီးနေကျပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ညနေဘက်မှ ထွက်တဲ့ ပုသိမ်သူရှပ်ပြေးကိုပိုကြိုက်တယ်။ အိပ်စင် အိပ်ခန်း၂မျိုးပါတော့ ကိုယ့်အခန်းကို သော့ခတ်ပြီး သင်္ဘောဦးတက် လေခံညှင်း ။ နောက်တမျိုးကြိုက်တာက ဘီယာစတေရှင်ပါတယ်။
ကိုအမတ်မင်းရဲ့ ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး အားပေးသွားပါတယ်.။
ကိုယ်က ရေမကူးတတ်တာ ကြောင့်အသည်းယားပြီးကြောက်စရာကြီးလို့။